पोखरामा सडक दुर्घटनामा ज्यान गुमाएका प्रहरीलाई शोक सलामी – Khabar PatrikaNp
पोखरामा सडक दुर्घटनामा ज्यान गुमाएका प्रहरीलाई शोक सलामी
August 21, 2020 199
पोखरा : पोखरामा सडक दुर्घटनामा ज्यान गुमाएका दुई प्रहरीलाई शोक सलामी अर्पण गरिएको छ । पोखरा ५ मालेपाटनमा बुधवार ड्युटीकै क्रममा बोलेरो जिपले ठक्कर दिँदा प्रहरी हवल्दार डम्बरबहादुर थारु र प्रहरी जवान चन्द्रबहादुर बगाले घाइते भइ उपचारका क्रममा ज्यान गएको थियो ।
पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पतालको प्रांगणमा गण्डकी प्रदेश प्रहरी प्रमुख तथा डिआइजी घनश्याम अर्यालको उपस्थितिमा शोक सलामीसहित श्रदान्जलि व्यक्त गरिएको हो । डिआइजी अर्यालले प्रहरी संगठनको झण्डा ओढाई पुष्पगुच्छासहित श्रद्धाञ्जली अर्पण गरे । इमान्दार र कर्तव्यनिष्ठ प्रहरी कर्मचारीलाई गुमाउँनु पर्दा नेपाल प्रहरी संगठनलाई क्षति पुगेको डिआइजी अर्यालले बताए । शोक सलामी कार्यक्रममा संघीय प्रहरीइकाइ कार्यालय पोखराका प्रमुख प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक, जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीका प्रमुख लगायतको उपस्थित थिए ।
मोटरसाइकलमा गस्तीको क्रममा बागलुङ बसपार्कबाट जिरो किमी जाने क्रममा सोही दिशाबाट आउँदै गरेको बलेरो जिपले पछाडीबाट ठक्कर दिएको थियो । ठक्करबाट गम्भीर घाइते दुवै जनाको उपचारको क्रममा मृत्यु भएको थियो । बर्दिया बढैयाताल का ३४ वर्षीय प्रहरी हवल्दार थारु २०६२ असारमा प्रहरी सेवामा प्रवेश गरेका थिए ।
पाल्पा रिप्दिकोट गाउँपालिका ८ घर भएका प्रहरी जवान बगाले २०७६ साउन १ गते देखि नेपाल प्रहरीमा संगठनमा प्रवेश गरेका थिए । दुवै जना वडा प्रहरी कार्यालय बैदाममा कार्यरत थिए ।
Prevअस्पताल नलग्दा ‘होम आइसोलेसन’ मै संक्रमितको मृत्यु
Nextतीज विशेष साडीमा नायिका श्वेता खड्का (फोटो फिचर सहित हेर्नुहोस् )
९ बर्षका यि बालक जसले सिकाउछन् अरुलाई गाडी चलाउन, देख्नेहरु सबै चकित….. ! हेर्नुहोस भिडियो
आज विश्वकर्मा पूजा, किन र कसरी गर्ने ? हेर्नुहोस् (विधिसहित)
“घरमा पाहुना नबोलाऔं र पाहुना बन्न पनि नजाऔं”
मेमोरी किंगका रुपमा चर्चामा रहेका विजय शाही रुँदै मिडियामा
घरमा भ्यागुतो आयो भने के हुन्छ ? शुभ कि अशुभ… ?थाहा पाउनुहोस (29612)
श्रीमती सधैं श्रीमानको बाँया तिर किन सुत्छिन….? जानी राखौ (28213)
काठमाडौँ महानगरपालिकाका यी ठाउँहरु सिल गरियो, घर बाहिर ननिस्कन प्रशासनको आग्रह !! (27817)
कलिलो यु’वतीहरु राखेर यौ’न धन्दा : भिडियो हेर्नुहोस (24615)
भाग्यमानीको हातमा कति ओटा शंख वा चक्र हुन्छ…..? थाहा पाउनुहोस् (22162)
२५०० तिरे काठमाडौंमा १५ वर्षे किशोरी छ्यापछयाप्ती,साहुनीले १५ सय खाइदिन्छे, मलाई एक हजारमात्रै। थोरै पैसा पाउँदा रुन मन लाग्छ। (20914)
सोनी हाङ्मा लिम्बुको प्रेमी भनिएका डीकेन लिम्बु आए मिडियामा, गरे सबैलाई चकित पार्ने खुलासा…! भिडियो हेर्नुहोस (15579)
मुस्लिम अरबिक महिलालाई ग’र्लफ्रेन्ड बनाउदा काठमाण्डौमा महल बन्यो… (14920)
अचानक सिल गरियो भर्खरै काठमाडौंका यी ठाउँहरु, घर बाहिर ननिस्कन प्रशासनको आग्रह !! (13586)
आफ्नो श्रीमती भगाउनेको श्रीमती लिएर फरार (13299)
आज एकादशी,यस्ता कार्य गर्नुहोस,भगवान बिष्णुले नसोचेको लाभ र खुसी दिनुहुनेछ
राजयोग र सुखी जीवन दर्शाउने हस्तरेखा कुन ?
कस्ता हुन्छन मंगलबार जन्मिएका मानिसहरू,हेर्नुहोस
अबको ५ वर्ष ४ राशिले ढिलो नगरी यी व्यवसाय सुरु गर्नुहोस, सफलताले शिखर चुम्नेछ
मंगलबार गणेश भगवानको पुजा कसरी गर्ने ?